सकारात्मक बन्दै शेयर बजार, कारोबार रकम वृद्धि
काठमाडौं, पुस २१ : शेयर बजारमा सोमबार ट्रेडिङ्ग उपसूचकबाहेक अरु सबै उपसूचकमा वृद्धि भएको छ। सर्वाधिक वृद्धि हुनेमा क्रमशः बैंकिङ्ग, लघुवित्त र म्युचुवल फण्ड समूह रहेको छ।
सोमबार नेप्से परिसूचक १८ दशमलव २६ ले बढेर १२०० दशमलव ६९ को विन्दुमा बन्द भएको छ। दोस्रो बजार १ दशमलव ५४ प्रतिशतले बढेको छ। ११८३ दशमलव ३६ को विन्दुमा खुलेको दोस्रो बजार १२०० दशमलव ६९ को उच्च विन्दुसम्म पुगेको थियो।
बजारको न्यून विन्दु ११८३ दशमलव ३६ रहँदा ८४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकम भने बढेको छ।
आज सबैभन्दा धेरै एन.आई.सी. एशिया बैंकको शेयर किनबेच भएको छ। एन.आई.सी. एशिया बैंकको ८ करोड ४७ लाख बराबरको शेयर किनबेच भएको छ।
आज वोमी माइक्रो फाइनान्सका शेयरधनीले सर्वाधिक ९ दशमलव ९३ प्रतिशतले कमाए भने नेको इन्स्योरेन्सका शेयरधनीले सर्वाधिक ४ दशमलव ९४ प्रतिशतले गुमाए।
अघिल्लो कारोबार दिनको निष्कर्ष अनुसार बजारको प्रवृत्ति र सूचकहरुलाई समग्रमा हेर्दा बजारले अब मुख्य प्रतिरोध १२०० को क्षेत्रलाई सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ भनिएको थियो। आज बजारले यो मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध क्षेत्रलाई पटक– पटक परीक्षण गरेको थियो र बजार यही क्षेत्रमा बन्द भएको छ।
चित्र नं १ मा दैनिक मैनबत्ती विश्लेषण अनुसार हाल बजारले १२०० को मुख्य प्रतिरोध क्षेत्रलाई सामना गरिरहेको देखिन्छ। दोस्रो बजार खुलेको विन्दु र अन्तिम विन्दु क्रमशः न्यूनतम अधिकतम विन्दु भएकाले ‘बुलिस मारुबोजु’ मैनबत्ती आकृति बनाएको छ। यो आकृतिले अर्को कारोबार दिन पनि पहिलो समय बढ्ने संकेत गरेको छ। परिमाणले आजको मैनबत्तीलाई समर्थन गरेको छ।
चित्र नं. २ मा, दुई दिनको कारोबार कस्तो रह्यो भनेर हेर्नलाई पाँच मिनेट समयावधिको मैनबत्तीलाई प्रयोग गरिएको छ। अघिल्लो बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको बजार आज पनि बजारले त्यही निरन्तरता पाएको छ।
आज २१ र ५० समयावधिको एक्सपोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए)हरु फराकिलो हुँदै गएकाले बजारमा क्रेताको चाप रहेको संकेत गरेको छ। रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स (आरएसआई) ६९ दशमलव ३६ अंकमा रहेको छ। आरएसआईको प्रवृत्तिले भने खरिदकर्ताको चाप केही कमजोर हुन थालेको संकेत गरेको छ।
स्टोकास्टिक अक्सिलेटरले कारोबारको अन्तिम समयमा शेयर बढी खरिद भएको संकेत गरेको छ।
निष्कर्ष : छोटो समयावधिको बजारको प्रवृत्ति र सूचकहरुलाई समग्रमा हेर्दा बजार सकारात्मक रहेको र यदि बजार १२०० भन्दा माथि स्थिर रहेमा बजार अझ सकारात्मक हुन सक्ने संकेत गर्दछ। अर्को तत्कालीन प्रतिरोध १२१५ को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। सामान्य टेवा भने ११८० को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ।
Published Date: Monday, 6th January 17:40:58 PM